l Alternative nke QuickTime MPEG-2 playback akụrụngwa
QuickTime anaghị akwado niile mgbasa ozi formats. Mkpa ka i nwere ndị ọzọ plugins ma ọ bụ mgbasa ozi encoders ma ọ bụ decoders na-ekwe ka ụfọdụ faịlụ na-egwuri.
Ọ bụrụ na ị na-achọ n'ime a akụrụngwa na ga-ikwado ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na ụzọ nke importing faịlụ, mgbe ahụ, MPEG-2 bụ akụrụngwa gị oke.
Gịnị bụ MPEG-2
MPEG -2 playback akụrụngwa na-enyere QuickTime ọrụ mbubata na-egwu azụ ọ bụla MPEG-2 faịlụ. MPEG-2 adịghị enye ndị nyopụta arụmọrụ dị ka ndị dị otú ahụ na-apụghị-eji na-ike ma ọ bụ encode MPEG-2 ọdịnaya.
Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ dị ka mpg, MPEG, nkwa, vroom, m2v, m2a, na m2s.
Audio faịlụ-akwado site na nke a mpaghara nwere ihe ọ bụla nke dị n'elu faịlụ na-ebu audio oyi akwa 1 ma ọ bụ 2. Ọ bụla MPEG faịlụ na nwere PCM, DTS, ma ọ bụ AC3 audios na-adịghị akwado.
Nke a akụrụngwa na-akwado ma ọ bụ pụrụ playback-abụghị ezoro ezo DVD dị ka mma.
Ọ bụla Disk ruo eruo na a Content scramble System (CSS) dị ka Original DVD na azụmahịa gosiri DVD na-adịghị akwado.
Banyere MPEG-2 playback akụrụngwa
Aha: MPEG-2 playback akụrụngwa
Bụ a kọwaa ISO ọkọlọtọ maka nzuzo nke fim na agbakwunyere audio ọmụma ya acronym-e si aha ya na zuru (N'ịga Pictures ọkachamara Group).
Key atụmatụ: Na ya ezi video mkpakọ ike. MPEG-2 bụ ụkpụrụ maka dijitalụ TV ụwa. Na-esonụ atụmatụ-eme ka ọ pụta ìhè.
Video mkpakọ na-enye ohere maka backward ndakọrịta na MPEG-1
Na ya ike mpikota onu interlaced video na elu àgwà na a mkpebi nke ruo 4 ugboro ọzọ, akọwapụta etiti ma ubi foto ghọrọ n'ezie ebe MPEG-2 bụ nchịkọta nke etiti foto na ubi foto.
MPEG-2 bụ ike họrọ kasị kwesị ekwesị mkpakọ usoro ebe ọ bụ ihe ọkaibe karịa encoder. N'ihi ya, anyị na-enweta nke kacha mma mma foto site na ya.
Audio nwekwara ike itinye na koodu na ụzọ dị iche iche ka dakọtara dị iche iche bit udu.
Interlaced na-enwe Ọganihu Video
Na interlaced technology ọ bụla oyiyi bụ a usoro nke kehoraizin ahịrị. A na-enyere na-eke ihe kọwaa zuru ezu foto otú ibawanye image mkpebi.
-Enwe Ọganihu video bụ a mejupụtara nke vetikal edoghi akpụ a zuru ezu oyiyi. A na-enye sharper na elu mkpebi oyiyi.
Enwekwukwa Audio ngbanwe
Audio koodu site MPEG-2 playback akụrụngwa na-enye elu àgwà stereo, mono na ndị ọzọ na audio atụmatụ.
MPEG-2 audio mkpakọ-enye maka elu bit udu nke ruo 64kbps.
Ike ikpokọta dị iche iche MPEG iyi na otu nnyefe iyi
Transport multiplexing ahụ kwe omume mgbe eji a playback mpaghara.
Nchikota dị iche iche faịlụ na ụdị n'ime otu iyi e mere ka o kwere ka abịakọrọ video, audio na ndị ọzọ na data-etinye n'ime otu synchronous bit iyi n'ihi na nnyefe.
Multiplexed n'ókè nwere ike mere maka Radio ugboro njikọ, dijitalụ Broadcasting, USB TV, Ikuku Technologies, Digital ụtụ magazin Links na Packet Cell Links dị ka Internet.
Scalability-enyere anyị aka nwere video na ihe karịrị ihe onwunwe ndị dị otú ahụ dị ka mkpebi, àgwà na complexity.
Data nwere ike partitioned abụọ ma ọ bụ karịa n'ígwé na onye ọ bụla oyi akwa nyere otu ma ọ bụ a dị iche iche mkpebi.
Nke ugbu a ahịa ọnụego nke nbudata QuickTime MPEG-2 playback akụrụngwa si Apple Store bụ banyere $ 20.
Wondershare Video Ntụgharị maka Mac
Ọ bụ ike ngwa ga-ezute gị niile video akakabarede mkpa. Ọ atọghata si nta ka ọ bụla Ọkpụkpọ na bụ ya ebupụ atụmatụ, ị nwere ike izipu faịlụ ka ọ bụla na ngwaọrụ nchekwa nke gị nhọrọ.
N'ihi na ndị ọkachamara video editọ ọ bụ a otu nkwụsị ahịa n'ihi na edezi, nbudata, converting, na-ere ọkụ gị videos. Ị nwere ike nakwa nyefee faịlụ gafee web.
Wondershare Video Ntụgharị bụ quickest ngwọta maka Digital ntụrụndụ. Ya akakabarede ọsọ dabeere APEXTRANS technology nke sụgharịta ka a ọsọ nke ruo 30 ugboro ngwa ngwa karịa a ot media Ntụgharị.
Ya n'ire ebe bụ unmatched ọnụ ọgụgụ nke formats ọ na-akwado nke na-enye elu àgwà mmepụta na a belata file size pụtara na ị na-azọpụta na ngwaọrụ gị nchekwa.
Na gị Mac Machine i nwere ike nyefee media iji wireless Njikọta enweghị enyemaka nke a USB. A na-emetụta maka ihe ọ bụla Apple na Android ngwaọrụ.
Iji Wondershare video Ntụgharị na-enye gị nnwere onwe na-enye gị videos na ime anya na njikere pịa ngwaọrụ hụrụ n'ime ya edezi ọrụ.
Ị nwere ike ibudata videos kpọmkwem site YouTube, tọghata na mbupụ ha ka ha ọ bụla na-ebugharị ebugharị media nile na otu otu nzọụkwụ.
Wondershare Video Ntụgharị functionalities
1. akwado Formats
The egosi na tebụl dị iche iche mmepụta formats akwado maka akakabarede.
2. Dezie ọrụ
The edezi ọrụ nke a App arụ ọrụ nke ọma ma na-enwechaghị ahụmahụ na ọkachamara video editọ dị ka ọ na-enye gị ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji welie na hazie gị video, ziri ezi na importing ka edezi & transcription, n'ikpeazụ, na-agbakwunye pụrụ iche utịp. Otu edit button na-emi odude esote onye ọ bụla video clip na mgbe ị na pịa ya a popup menu egosi nke na-enye gị ise 'isi' edezi functionalities dị ka mkpụbelata, mmetụta, akuku, watermark na sobtaitel.
Ẹkedori ngwa ma tinye a nkiri site ma Dọrọ na dobe ụzọ ma ọ bụ site na ịpị dapụtara onodu menu dị ka e gosiri.
Basic edezi-enye ohere maka trimming, kewara, n'usoro n'usoro, cropping ma ọ bụ n'isonyere videos dị ka e gosiri na ụdi menu.
Ihe atụ, iji ubi a clip
Họrọ clip na usoro iheomume (n'elu oyiyi-egosi na a usoro iheomume)
Right pịa ma họrọ na akuku site na onodu menu
Site dapụtara window resize na rektangulu na-akọwa ihe ndị ha chọrọ size rụchaa cropping.
Anyị nwekwara ike ịgbakwunye mmetụta site buru dị iche iche nzacha itinye na nkiri. Ị nwere ike ide, Gbanwee, wepu ma ọ bụ mmasị mmetụta.
Iji tinye / tinye ebudatara ndepụta okwu a nkiri
Mbubata nkiri faịlụ.
Pịa na edit button n'akụkụ aka nri na ngalaba nke window.
Pịa na sobtaitel na pịa + (gbakwunyere) iriba-ama tinye ma ọ bụ mbubata sobtaitel.
Ihuchalu sobtaitel na usoro ya na gị na nkọwapụta na ebe ị chọrọ ka ọ na gosiri na ihuenyo.
Anyị na-aga media n'ọbá akwụkwọ gaa họrọ chọrọ mgbanwe mmetụta.
Ịdọrọ ntughari ka ọnọdụ ị chọrọ na-egosi n'etiti abụọ mkpachị dị ka e gosiri.
Iji tinye a mgbanwe mmetụta
Right pịa ọ bụla na mgbanwe mmetụta si media Ọbá akwụkwọ na họrọ random ihe niile.
Iji wepu a nkebi
Họrọ nkebi ị chọrọ wepụrụ ma ma pịa on Nhichapụ isi si keyboard ma ọ bụ nri click na faịlụ na pịa Nhichapụ dị ka e gosiri.
Mgbe nile a na-eme na njikere ịkọrọ ndị ọzọ, ị nwere ike akpọkukwa Export ma na-eso ọrụ.
Wondershare Enye dị iche iche òkè formats ona gị mmasị.
Ị nwekwara ịhọrọ nke ngwaọrụ ị chọrọ igwu na na-eji bupu mode.
Ndị na-esonụ image na-egosi na nhọrọ maka media nchekwa mgbe ị pịa mbupụ bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere usoro mgbasa ozi na-eji ya na gị mma, ị nwere ike wee soro kpaliri na ndị nwere nkiri kpọfere DVD.
Nkwado maka Wondershare Video Ntụgharị bụ ngwa ngwa dị n'ụdị nke video downloads na pdf faịlụ na pụrụ ịchọta online mfe.
> Resource> QuickTime> Alternative nke QuickTime MPEG-2 playback akụrụngwa